Buddhist Circuit Of Odisha Tour | Wac: + 91-993.702.7574 si aad ballansatid
Maalmahan Odisha waxay noqdeen dalxiis weyn oo dalxiis ah. Kumanaan macbadyo, dhaqan iyo dhaqameed dhaqameed oo ay weheliyaan quruxda dabiiciga ah ee kaynta iyo duur-joogta iwm waxay keenaan dalxiis aad u badan. Halkaan oo dhan, Buddhist Circuit Odisha Tour ayaa noqotey mid caan ah. Kumanaan qurux badan Sawirada Buddhist waxay joogaan meelaha kala duwan ee gobolka. Buddhist Circuit Odisha Tour wuxuu dadka ka caawiyaa sidii loo kordhin lahaa aqoontooda ku saabsan dhaqanka Buddhistii hore ee Odisha iyo qowmiyadii hore ee Buddhist ee Odisha. Buddhist Circus Odisha Tour wuxuu leeyahay farshaxanno muhiim ah oo ah Buddhist caag ah oo ku yaalla Odisha oo matalaya Bodhisattva Avalokiteshvara oo qaababkiisa kala duwan sida Padmapani, Lokeshvara, Vajrapani iwm. Waxaa laga heli karaa sawirada Tara, Manjusri, Amoghasiddhi iwm. Matxafka Lalitgiri wuxuu ilaaliyaa tirooyinka dhererka Bodhisattva. Tirooyin badan oo badan oo noocan ah waxay ku yaalaan Udayagiri iyo Ratnagiri. Buddhist Circuit Of Odisha Tour wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sahamiso dhammaan goobahan quruxda badan ee Odisha.
Marka aad timaaddo baasaska Bhubaneswar / Saldhigga Tareenka, u wareejinta hoteelka. Booqashada galabnimo ee Nandankanan Zoo (Isniin Isniinta). Habeenimadii beri ee Bhubaneswar.
Kadib markii quraacda ay booqanayeen macbudyada - Lingaraj, Rajarani, Parasurameswar, Mukteswar, & Bhaskareswar Macbadka laga soo bilaabo 7th ilaa qarnigii X-X. Booqashada galabnimo ee Khandagiri & Udayagiri Jaangooyuhu waxay ka tirsan yihiin qarnigii XY Habeenimadii beri ee Bhubaneswar.
Ka dib quraac maalin dhan u socdaalay Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri Buddhist Monasteries & Stupas. Habeenimadii beri ee Bhubaneswar
Ka dib quraac quruxbadan oo ku taal tuulada Nuapatna, tuulada Sadeibarini Dhokra iyo Maxima Cult ee Joranda. Habeenimadii beri ee Bhubaneswar.
Quraac ka dib Goobjooga Puri en-route at Dhauli (Shanti Stupa), Pipili (tuulada shaqada Applique), Konark (Sun Sun) iyo Chandrabhaga Beach. Booqashada habeenkii ee Lord Jagannath (Kuwa aan Hindus ahayn lama oggola gudaha gudaha), Raghurajpur (rinjiyeynta ranjiga). Habeenimadii beri ee Bhubaneswar.
Ka dib marka quraacdu dhacaan barta Bhubaneswar Airport / Saldhiga Tareenka ee socdaalka.